Zaza – Midi Madagasikara
Antsahabe : Zaza fito taona saika nisy naka ankeriny
Redaction Midi Madagasikara 22 janvier 2014 Antsahabe, naka ankeriny, Zaza
Ankizy vavy kely fito taona no nisy saika haka an-keriny tamin’ny sabotsy lasa teo teny amin’ny faritra Antsahabe. Nirava avy nanao “cours” izy tamin’ny 12 ora antoandro, hoy ny vaovao voaray. Avy hatrany dia nisy olona efatra, lahy telo sy vavy iray nisambotra azy, hoy ny vaovao re teny an-toerana. Folaka vokatr’izany ny sandrin’ilay zaza.…
Toliara : Zazalahy 7 taona saika hamidin’ny nenitoany 10 tapitrisa
Redaction Midi Madagasikara 22 janvier 2014 10 tapitrisa, hamidin’ny nenitoany, Toliara, Zaza
Trangam-piaraha-monina hafa indray no nitranga tany Toliara omaly. Nanizingizina ny renin’ilay ankizilahy 7 taona fa saika hamidin’ny rahavaviny roa tapitrisa ariary tamina vazaha ny zanany nipetraka tany aminy. Somary sahirana ara-pivelomana ny renin’ity zazalahy ity ka napetrany tany amin’ny nenitoany misipa amina vazaha ny zanany, satria tsy harany ny sakafo sy ny fianarany. Nahazo loharanom-baovao…